မြန်မာ့တပ်မတော် စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းနေပြီလား? – Blue Sea
စစ်ရောင် ကျောပိုးအိတ် နွမ်းနွမ်းက နောက်မှာတွဲကျနေသည်။ ခါးမှာ စစ်အသုံးအဆောင်တချို့၊ ကြိုးခွေတစ်ချောင်း၊ သေနတ်ကို ထမ်း၍ စီတန်းလျှောက်နေသည်။ ရှေ့က စစ်သည်တွေ ကျောပိုးထားတာတွေက ဝါးဖြင့်ယက်လုပ်သည့် ခြင်းကြားတောင်းတွေ။ ခြင်းကြားတောင်းတွေထဲ ဘာတွေပါသလဲတော့မသိ။ ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ရောက် မြန်မာစစ်သားတို့၏ အသွင်အပြင်က အတော်ပင်ပန်းနွမ်းခြောက်နေသည်။ မျက်နှာမှာ ကြေးနီရာင်ဝင်းပြီး အဆီပျံနေသည်။ မေးရိုးကြီးတွေ မြင်နေရသည်။ နေဒဏ် မိုးဒဏ် ရာသီဥတုဒဏ်ကို အံတု၍ စစ်မြေပြင်မှာအချိန်အကြာကြီးနေရသော မြန်မာစစ်သည်တစ်ဦး၏ အသွင်သဏ္ဍာန်က နွမ်းနွမ်းဖတ်ဖတ်။
အမေရိကန် မရင်းတပ်တွေ စစ်ထွက်လျှင် သူတို့တစ်ကိုယ်လုံး ခေတ်မီကရိယာတန်ဆာပလာတွေနှင့် ပြည့်နေသည်။ ခေတ်မီလက်နက် အပြည့်ကိုင်ထားသည်။ စစ်ဦးထုပ်ကအစ စစ်ဖိနပ်အဆုံးတစ်ကိုယ်လုံး စစ်သည်တစ်ယောက်အတွက်လိုအပ်သော ကရိယာမျိုးစုံ ဝတ်ဆင်ထားသည်။ လူတောင် မမြင်ရ။ စစ်ရုပ်ကြီးလား အောက်မေ့ရသည်။ တောင့်တင်းသန်မာသော ခန္ဒာကိုယ်။ လေ့ကျင့်သားပြည့်ဝနေသော လှုပ်ရှားမှု။ ခြင်းကြားတောင်း ကျောပိုး၍ စစ်ထွက်နေသော မြန်မာစစ်သားတွေ နှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မိသည်။ စစ်ရေးစွမ်းဆောင်ရည် တော့ မသိ။ ပြင်ပသဏ္ဍာန်မှာတော့ အတော့်ကို ကွာခြားနေသည်။ ရခိုင်စစ်မြေပြင်မှာပဲ ကြည့်ကြည့်၊ ကချင်စစ်မြေပြင်မှာပဲ ကြည့်ကြည့် ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ရောက် မြန်မာစစ်သည်တို့၏ သဏ္ဍာန်ကို ထိုပုံစံအတိုင်း မြင်ရသည်။
နိုင်ငံ၏ အဓိက စစ်တက္ကသိုလ်ကြီး တည်ရှိရာ ပြင်ဦးလွင်မြို့အထိ လက်နက်ကိုင်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေ ဝင်ရောက်ပြီး ပစ်ခတ် မီးရှို့မှုတွေ လုပ်သွားသည်။ စစ်အင်ဂျင်နီယာတက္ကသိုလ်ကို လောင်ချာဖြင့် ထုသည်။ မြို့ဝင် မြို့ထွက် တိုးလ်ဂိတ်ကို ဝင်ပစ်သည်။ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့သည် တစ်ချိန်တည်း တစ်ပြိုင်တည်း နေရာငါးခုကို ဝင်ရောက်စီးနင်းသည်။ မန္တလေး-မူဆယ် အဓိက ကုန်သွယ်လမ်းကြောင်းပေါ်က ဂုတ်တွင်းတံတားကို မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်သည်။ ရဲကင်းစခန်းကို ဝင်ရောက်စီးနင်းသည်။ တိုးလ်ဂိတ်အစောင့်ကို ပစ်သတ် မီးရှို့သည်။ သြဂုတ်လ(၁၅)ရက်၊ အရုဏ်ဦး အလစ်အငိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုမှာ စစ်သည်အရာရှိ (၉)ဦး၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် (၃)ဦး၊ အရပ်သား (၃)ဦး သေဆုံးသည်။ လာရောက် တိုက်ခိုက်သည့်အဖွဲ့မှာ TNLA, AA, MNDAA လက်နက်ကိုင်သုံးဖွဲ့ ပူးပေါင်းထားသောအဖွဲ့ဖြစ်ပြီး အင်အား ၂၀၀ နှင့် ၃၀၀ ကြားဟု ခန့်မှန်းသည်။
ဤမျှ အင်အားများပြားသော လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က ပြင်ဦးလွင်ကဲ့သို့ စစ်နယ်မြေအတွင်းထိ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လာခြင်းက အစိုးရစစ်တပ်ကို နားရွက်တံတွေးဆွတ် စိန်ခေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကြားရသူအားလုံး အထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားသည်။ သည်လို နေရာမျိုးအထိ ရန်သူက ဝင်လာနိုင်ခြင်းမှာ လက်ရှိ စစ်တပ်၏ အခြေအနေကို ပြသနေသည်။ လုံခြုံရေးတွေ ဘယ်လောက်အထိ ကျိုးပေါက်နေပြီလဲ။ ဒါကို စစ်ရေးနားလည်သူတချို့က ထောက်လှမ်းရေးစနစ် ကျဆုံးခြင်း ( Intelligence Failure ) ဟု သုံးသပ်သည်။ ရန်သူက အတွင်းပိုင်းအထိ ထိုးဖောက် တိုက်ခိုက်မှုတွေ လုပ်နေတာ ယခုမှ မဟုတ်။ ကြာပြီ။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၇၊ သြဂုတ်လ ရဲကင်းစခန်း ၃၀ အား တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ်များ။ ပြီးခဲ့သည့် ဇန်နဝါရီလ (၄)ရက်၊ အေအေ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က ဘူးသီးတောင် နှင့် မောင်တောမြို့နယ်အတွင်း ရဲစခန်းလေးခုအား တစ်ပြိုင်နက်တည်းဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ထိုဖြစ်စဉ်တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် (၁၃)ဦးသေဆုံးပြီး (၉)ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ကာ လက်နက်ခဲယမ်းများယူဆောင်သွားခြင်း၊ သုံ့ပန်းအဖြစ် ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်းများ ရှိခဲ့သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်၌ ရဲကင်းစခန်းများ ယခုကဲ့သို့ အရုဏ်ဦးတိုက်ခိုက်ခိုက်ခံရမှု တစ်ကြိမ်မက ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်း စစ်တပ်သည် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး၊ ထောက်လှမ်းရေးမပြုလုပ်နိုင်ခဲ့။
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဘင်္ဂါလီ အာဆာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်တုန်းကလည်း နယ်ခြားစောင့် ရဲတပ်ရင်း တွေ စီးနင်းခံရသည်။ ရဲတပ်သားတွေ အသက်ဆုံးရှုံးရသည်။ ထိုစဉ်က ကြားသိရသော အချက်တစ်ချက်မှာ နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ လက်နက်အင်အားမပြည့်စုံ။ မီးကျိုးမောင်းပျက်လက်နက်တွေသာ တပ်ဆင်ထားသဖြင့် အရေးမလှခဲ့ရဟု ဆိုသည်။ ဘူးသီးတောင် နှင့် မောင်တောမြို့နယ်ရှိ ရဲစခန်းများကို အေအေက တစ်ပြိုင်နက်တည်း တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတွင်လည်း ရဲစခန်းတွေကျခဲ့သည်။ အသက်တွေ ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ ထိုအခြေအနေမျမုးတွင် စစ်ဘက်က တုံ့ပြန်တတ်သည်ကား ရဟတ်ယာဉ်အသုံးပြု တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ယခုအခြေအနေတွင် မြန်မာ့တပ်မတော်၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပတ်သက်၍ မေးခွန်းထုတ်စရာတွေ များစွာ ရှိလာသည်။ လက်နက်ကိုင် ရန်သူအဖွဲ့အစည်းများသည် မြန်မာ့တပ်မတော်ကို မမှုတော့သည့်အလား ဖြစ်လာသည်။ တပ်မတော်သည် အပေါ်ယံအင်အားတိုးချဲ့မှုအဖြစ် တိုက်လေယာဉ်တွေ၊ရဟတ်ယာဉ်တွေ၊ တင့်ကားတွေ၊ ရေငုပ်သင်္ဘောတွေ နိုင်ငံဘဏ္ဍာ အကြီးအကျယ်သုံးပြီး ဝယ်ယူအားဖြည့်နေသော်လည်း အောက်ခြေတပ်ဖွဲ့အရင်းအမြစ်မှာ ယိုင်နဲ့နေသည်။ မြန်မာ့တပ်မတော်၏ အင်အားစုဆောင်းပုံမှာ ဆန္ဒအလျောက် တာဝန်ထမ်းခြင်း ဖြစ်သည်။ တပ်သားသစ် စုဆောင်းရရှိမှုအခက်အခဲရှိသလို ထောင်နှင့်ချီသော အရာရှိလောင်းများကို စစ်တက္ကသိုလ်များက နှစ်စဉ်မွေးထုတ်သည်။
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များနှင့် တပ်မတော် ထိတွေ့တိုက်ပွဲများ ဖြစ်နေခဲ့သည်မှာ ဆယ်စုနှစ်တွေ ချီလာခဲ့ပြီ။ ယခုချိန်ထိ မပြီးဆုံးသေး။ စစ်တို့၏ သဘောမှာ အရှုံးအနိုင် ရှိသည်။ တစ်ဖက်က နိုင်လျှင် တစ်ဖက်က ရှုံးမည်။ အဖြေတစ်ခု ရှိသည်။ ယခုတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးက တန်းလန်း။ စစ်ပွဲတွေက တန်းလန်း။
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာ ၁၉၈၃ ခုနှစ်ကတည်းက ပြည်နယ်ခွဲထွက်ရေး တမီလ်တိုက်ဂါးတွေ အစိုးရကို တော်လှန်ခဲ့သည်။ တမီလ်ကျားတွေက အင်အားကြီးမားသလို သီရိလင်္ကာအစိုးရကိုပင် ကောင်းစွာ စိန်ခေါ်တိုက်ခိုက်နိုင်သည်။ သီရီလင်္ကာ မြောက်ပိုင်း နှင့် အရှေ့ပိုင်း တမီလ်ကျားများ ထိန်းချုပ်ထားသည့် နယ်မြေကို အစိုးရက လက်လွှတ်ထားရသည်။ တမီလ်ကျားတွေက အဖျက်အမှောက်မျိုးစုံ ပြုလုပ်သည်။ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု၊ ဗုံးခွဲမှု မျိုးစုံပြုလုပ်သည်။ သီရိလင်္ကာစစ်တပ်နှင့် တမီလ်ကျားတို့၏ စစ်ပွဲက ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကျမှ ပြီးဆုံးသွားသည်။ ၂၆ နှစ်ကြာ သီရိလင်္ကာပြည်တွင်းစစ်မှာ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူ ၈၀၀၀၀ မှ ၁၀၀,၀၀၀ ကြားအသက်ဆုံးရှုံးရသည်ဟု ကုလသမဂ္ဂ အစီရင်ခံစာအရ သိရသည်။ မြန်မာပြည်က ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေလိုပဲ သီရိလကာင်္အစိုးရ နှင့် တမီလ်တိုက်ဂါးတို့အကြား ငြိမ်းချမ်းရေးကို နော်ဝေအပါအဝင် ကုလသမဂ္ဂ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေ ကြားဝင်စေ့စပ်ပြီး လေးကြိမ်တိတိ အဓိက ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။
အပစ်အခတ်ရပ်စဲခဲ့သည်။ သို့သော် ငြိမ်းချမ်းရေးသည် တာရှည် မခံ။ ထပ်မံ ကျိုးပေါက်သည်။ တိုက်ပွဲတွေ ပြန်ဖြစ်သည်။ ၂၆ နှစ် သီရိလင်္ကာပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်း အဓိကငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်များအပြင် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှု အကြိမ် ၁၀၀၀၀ ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း အောင်မြင်မှု မရခဲ့။ နောက်ဆုံး ၂၀၀၆ ခုနှစ်ကျတော့ သီရိလင်္ကာအစိုးရက တမီလ်ကျားနယ်မြေတွေကို အင်အားသုံး ထိုးဖောက် သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကျတော့ တမီလ်ကျားနယ်မြေအားလုံးကိုကို သိမ်းပိုက်ပြီးတော်လှန်ရေး အမြစ်ပြတ်သွားသည်။ နောက်ဆုံးတွင် စစ်ရေးနည်းကို အသုံးချ ဇာတ်သိမ်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ စစ်ကြီးပြီးဆုံးသွားသော်လည်း သီရိလင်္ကာ စစ်တပ်၏ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုတော့ ယခုချိန်ထိပြောနေ ရေးနေကြတုန်းပင်။
မြန်မာပြည်အခြေအနေက တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အင်အားစုတွေ စုံလင်သည်။ လက်နက်အင်အား၊ လူအင်အားလည်း များပြားသည်။ ထို့ကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးစားပွဲဝိုင်းမှ တစ်ဆင့်သာ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်မည်။ စစ်ရေးနည်းက အားလုံးအတွက် အထိအခိုက် အဆုံးအရှုံးကြီးမားနိုင်သည်။ တိုင်းပြည်အတွက် အန္တရာယ်ကြီးမားသည်။ ယခုပဲကြည့်။ မြောက်ပိုင်း လက်နက်ကိုင် သုံးဖွဲ့၏ တိုက်ခိုက်မှုက နောက်ဆက်တွဲ တိုက်ပွဲတွေ။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေခံအဆောက်အဦးတွေ ပျက်စီး။ အပြစ်မဲ့ပြည်သူများ အသက်ဆုံးရှုံး။ နေရပ်အိုးအိမ်များကို စွန်ခွါထွက်ပြေး ဆိုသည့် ဒုက္ခသံသရာထဲ ရောက်လာတော့မည်။ ကမ္ဘာတွင် အရှည်ကြာဆုံး မြန်မာ့ ပြည်တွင်းစစ်က အခြားနိုင်ငံများနှင့်မတူသလို တပ်မေတော်ကလည်း အခြားတပ်မတော်များနှင့်မတူ။ ဤ ထူးခြားမှုကသည်ပင် မြန်မာ့ပြည်တွင်းစစ် သက်ဆိုးရှည်နေရသလော။ မပြောတတ်တော့ပါ။
စဈရောငျ ကြောပိုးအိတျ နှမျးနှမျးက နောကျမှာတှဲကနြသေညျ။ ခါးမှာ စဈအသုံးအဆောငျတခြို့၊ ကွိုးခှတေဈခြောငျး၊ သနေတျကို ထမျး၍ စီတနျးလြှောကျနသေညျ။ ရှကေ့ စဈသညျတှေ ကြောပိုးထားတာတှကေ ဝါးဖွငျ့ယကျလုပျသညျ့ ခွငျးကွားတောငျးတှေ။ ခွငျးကွားတောငျးတှထေဲ ဘာတှပေါသလဲတော့မသိ။ ရှတေ့နျးစဈမွပွေငျရောကျ မွနျမာစဈသားတို့၏ အသှငျအပွငျက အတျောပငျပနျးနှမျးခွောကျနသေညျ။ မကျြနှာမှာ ကွေးနီရာငျဝငျးပွီး အဆီပြံနသေညျ။ မေးရိုးကွီးတှေ မွငျနရေသညျ။ နဒေဏျ မိုးဒဏျ ရာသီဥတုဒဏျကို အံတု၍ စဈမွပွေငျမှာအခြိနျအကွာကွီးနရေသော မွနျမာစဈသညျတဈဦး၏ အသှငျသဏ်ဍာနျက နှမျးနှမျးဖတျဖတျ။
အမရေိကနျ မရငျးတပျတှေ စဈထှကျလြှငျ သူတို့တဈကိုယျလုံး ခတျေမီကရိယာတနျဆာပလာတှနှေငျ့ ပွညျ့နသေညျ။ ခတျေမီလကျနကျ အပွညျ့ကိုငျထားသညျ။ စဈဦးထုပျကအစ စဈဖိနပျအဆုံးတဈကိုယျလုံး စဈသညျတဈယောကျအတှကျလိုအပျသော ကရိယာမြိုးစုံ ဝတျဆငျထားသညျ။ လူတောငျ မမွငျရ။ စဈရုပျကွီးလား အောကျမရေ့သညျ။ တောငျ့တငျးသနျမာသော ခန်ဒာကိုယျ။ လကေ့ငျြ့သားပွညျ့ဝနသေော လှုပျရှားမှု။ ခွငျးကွားတောငျး ကြောပိုး၍ စဈထှကျနသေော မွနျမာစဈသားတှေ နှငျ့ နှိုငျးယှဉျကွညျ့မိသညျ။ စဈရေးစှမျးဆောငျရညျ တော့ မသိ။ ပွငျပသဏ်ဍာနျမှာတော့ အတေျာ့ကို ကှာခွားနသေညျ။ ရခိုငျစဈမွပွေငျမှာပဲ ကွညျ့ကွညျ့၊ ကခငျြစဈမွပွေငျမှာပဲ ကွညျ့ကွညျ့ ရှတေ့နျးစဈမွပွေငျရောကျ မွနျမာစဈသညျတို့၏ သဏ်ဍာနျကို ထိုပုံစံအတိုငျး မွငျရသညျ။
နိုငျငံ၏ အဓိက စဈတက်ကသိုလျကွီး တညျရှိရာ ပွငျဦးလှငျမွို့အထိ လကျနကျကိုငျအကွမျးဖကျအဖှဲ့တှေ ဝငျရောကျပွီး ပဈခတျ မီးရှို့မှုတှေ လုပျသှားသညျ။ စဈအငျဂငျြနီယာတက်ကသိုလျကို လောငျခြာဖွငျ့ ထုသညျ။ မွို့ဝငျ မွို့ထှကျ တိုးလျဂိတျကို ဝငျပဈသညျ။ အကွမျးဖကျအဖှဲ့သညျ တဈခြိနျတညျး တဈပွိုငျတညျး နရောငါးခုကို ဝငျရောကျစီးနငျးသညျ။ မန်တလေး-မူဆယျ အဓိက ကုနျသှယျလမျးကွောငျးပျေါက ဂုတျတှငျးတံတားကို မိုငျးခှဲတိုကျခိုကျသညျ။ ရဲကငျးစခနျးကို ဝငျရောကျစီးနငျးသညျ။ တိုးလျဂိတျအစောငျ့ကို ပဈသတျ မီးရှို့သညျ။ သွဂုတျလ(၁၅)ရကျ၊ အရုဏျဦး အလဈအငိုကျဝငျရောကျတိုကျခိုကျမှုမှာ စဈသညျအရာရှိ (၉)ဦး၊ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျ (၃)ဦး၊ အရပျသား (၃)ဦး သဆေုံးသညျ။ လာရောကျ တိုကျခိုကျသညျ့အဖှဲ့မှာ TNLA, AA, MNDAA လကျနကျကိုငျသုံးဖှဲ့ ပူးပေါငျးထားသောအဖှဲ့ဖွဈပွီး အငျအား ၂၀၀ နှငျ့ ၃၀၀ ကွားဟု ခနျ့မှနျးသညျ။
ဤမြှ အငျအားမြားပွားသော လကျနကျကိုငျအဖှဲ့တဈဖှဲ့က ပွငျဦးလှငျကဲ့သို့ စဈနယျမွအေတှငျးထိ ဝငျရောကျတိုကျခိုကျလာခွငျးက အစိုးရစဈတပျကို နားရှကျတံတှေးဆှတျ စိနျချေါလိုကျခွငျးဖွဈသညျ။ ကွားရသူအားလုံး အထိတျတလနျ့ဖွဈသှားသညျ။ သညျလို နရောမြိုးအထိ ရနျသူက ဝငျလာနိုငျခွငျးမှာ လကျရှိ စဈတပျ၏ အခွအေနကေို ပွသနသေညျ။ လုံခွုံရေးတှေ ဘယျလောကျအထိ ကြိုးပေါကျနပွေီလဲ။ ဒါကို စဈရေးနားလညျသူတခြို့က ထောကျလှမျးရေးစနဈ ကဆြုံးခွငျး ( Intelligence Failure ) ဟု သုံးသပျသညျ။ ရနျသူက အတှငျးပိုငျးအထိ ထိုးဖောကျ တိုကျခိုကျမှုတှေ လုပျနတော ယခုမှ မဟုတျ။ ကွာပွီ။
ရခိုငျပွညျနယျမှာ ပွီးခဲ့သညျ့ ၂၀၁၇၊ သွဂုတျလ ရဲကငျးစခနျး ၃၀ အား တဈပွိုငျနကျတညျး ဝငျရောကျတိုကျခိုကျခဲ့သညျ့ဖွဈစဉျမြား။ ပွီးခဲ့သညျ့ ဇနျနဝါရီလ (၄)ရကျ၊ အအေေ လကျနကျကိုငျအဖှဲ့က ဘူးသီးတောငျ နှငျ့ မောငျတောမွို့နယျအတှငျး ရဲစခနျးလေးခုအား တဈပွိုငျနကျတညျးဝငျရောကျစီးနငျးတိုကျခိုကျခွငျး၊ ထိုဖွဈစဉျတှငျ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျ (၁၃)ဦးသဆေုံးပွီး (၉)ဦးဒဏျရာရခဲ့ကာ လကျနကျခဲယမျးမြားယူဆောငျသှားခွငျး၊ သုံ့ပနျးအဖွဈ ဖမျးဆီးချေါဆောငျသှားခွငျးမြား ရှိခဲ့သညျ။ ရခိုငျပွညျနယျ၌ ရဲကငျးစခနျးမြား ယခုကဲ့သို့ အရုဏျဦးတိုကျခိုကျခိုကျခံရမှု တဈကွိမျမက ရှိခဲ့ပွီဖွဈသျောလညျး စဈတပျသညျ ကွိုတငျကာကှယျရေး၊ ထောကျလှမျးရေးမပွုလုပျနိုငျခဲ့။
၂၀၁၇ ခုနှဈ၊ ဘင်ျဂါလီ အာဆာအကွမျးဖကျတိုကျခိုကျမှုဖွဈစဉျတုနျးကလညျး နယျခွားစောငျ့ ရဲတပျရငျး တှေ စီးနငျးခံရသညျ။ ရဲတပျသားတှေ အသကျဆုံးရှုံးရသညျ။ ထိုစဉျက ကွားသိရသော အခကျြတဈခကျြမှာ နယျခွားစောငျ့ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြား လကျနကျအငျအားမပွညျ့စုံ။ မီးကြိုးမောငျးပကျြလကျနကျတှသော တပျဆငျထားသဖွငျ့ အရေးမလှခဲ့ရဟု ဆိုသညျ။ ဘူးသီးတောငျ နှငျ့ မောငျတောမွို့နယျရှိ ရဲစခနျးမြားကို အအေကေ တဈပွိုငျနကျတညျး တိုကျခိုကျခဲ့ရာတှငျလညျး ရဲစခနျးတှကေခြဲ့သညျ။ အသကျတှေ ဆုံးရှုံးခဲ့သညျ။ ထိုအခွအေနမေမြုးတှငျ စဈဘကျက တုံ့ပွနျတတျသညျကား ရဟတျယာဉျအသုံးပွု တိုကျခိုကျခွငျးဖွဈသညျ။
ယခုအခွအေနတှေငျ မွနျမာ့တပျမတျော၏ စှမျးဆောငျရညျနှငျ့ပတျသကျ၍ မေးခှနျးထုတျစရာတှေ မြားစှာ ရှိလာသညျ။ လကျနကျကိုငျ ရနျသူအဖှဲ့အစညျးမြားသညျ မွနျမာ့တပျမတျောကို မမှုတော့သညျ့အလား ဖွဈလာသညျ။ တပျမတျောသညျ အပျေါယံအငျအားတိုးခြဲ့မှုအဖွဈ တိုကျလယောဉျတှေ၊ရဟတျယာဉျတှေ၊ တငျ့ကားတှေ၊ ရငေုပျသငေ်ျဘာတှေ နိုငျငံဘဏ်ဍာ အကွီးအကယျြသုံးပွီး ဝယျယူအားဖွညျ့နသေျောလညျး အောကျခွတေပျဖှဲ့အရငျးအမွဈမှာ ယိုငျနဲ့နသေညျ။ မွနျမာ့တပျမတျော၏ အငျအားစုဆောငျးပုံမှာ ဆန်ဒအလြောကျ တာဝနျထမျးခွငျး ဖွဈသညျ။ တပျသားသဈ စုဆောငျးရရှိမှုအခကျအခဲရှိသလို ထောငျနှငျ့ခြီသော အရာရှိလောငျးမြားကို စဈတက်ကသိုလျမြားက နှဈစဉျမှေးထုတျသညျ။
တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျတပျဖှဲ့မြားနှငျ့ တပျမတျော ထိတှတေို့ကျပှဲမြား ဖွဈနခေဲ့သညျမှာ ဆယျစုနှဈတှေ ခြီလာခဲ့ပွီ။ ယခုခြိနျထိ မပွီးဆုံးသေး။ စဈတို့၏ သဘောမှာ အရှုံးအနိုငျ ရှိသညျ။ တဈဖကျက နိုငျလြှငျ တဈဖကျက ရှုံးမညျ။ အဖွတေဈခု ရှိသညျ။ ယခုတော့ ငွိမျးခမျြးရေးက တနျးလနျး။ စဈပှဲတှကေ တနျးလနျး။
သီရိလင်ျကာနိုငျငံမှာ ၁၉၈၃ ခုနှဈကတညျးက ပွညျနယျခှဲထှကျရေး တမီလျတိုကျဂါးတှေ အစိုးရကို တျောလှနျခဲ့သညျ။ တမီလျကြားတှကေ အငျအားကွီးမားသလို သီရိလင်ျကာအစိုးရကိုပငျ ကောငျးစှာ စိနျချေါတိုကျခိုကျနိုငျသညျ။ သီရီလင်ျကာ မွောကျပိုငျး နှငျ့ အရှပေို့ငျး တမီလျကြားမြား ထိနျးခြုပျထားသညျ့ နယျမွကေို အစိုးရက လကျလှတျထားရသညျ။ တမီလျကြားတှကေ အဖကျြအမှောကျမြိုးစုံ ပွုလုပျသညျ။ အကွမျးဖကျတိုကျခိုကျမှု၊ ဗုံးခှဲမှု မြိုးစုံပွုလုပျသညျ။ သီရိလင်ျကာစဈတပျနှငျ့ တမီလျကြားတို့၏ စဈပှဲက ၂၀၀၉ ခုနှဈကမြှ ပွီးဆုံးသှားသညျ။ ၂၆ နှဈကွာ သီရိလင်ျကာပွညျတှငျးစဈမှာ အပွဈမဲ့ ပွညျသူ ၈၀၀၀၀ မှ ၁၀၀,၀၀၀ ကွားအသကျဆုံးရှုံးရသညျဟု ကုလသမဂ်ဂ အစီရငျခံစာအရ သိရသညျ။ မွနျမာပွညျက ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျတှလေိုပဲ သီရိလကာင်ျအစိုးရ နှငျ့ တမီလျတိုကျဂါးတို့အကွား ငွိမျးခမျြးရေးကို နျောဝအေပါအဝငျ ကုလသမဂ်ဂ၊ နိုငျငံတကာအဖှဲ့အစညျးတှေ ကွားဝငျစစေ့ပျပွီး လေးကွိမျတိတိ အဓိက ငွိမျးခမျြးရေးသဘောတူစာခြုပျ ခြုပျဆိုခဲ့သညျ။ အပဈအခတျရပျစဲခဲ့သညျ။ သို့သျော ငွိမျးခမျြးရေးသညျ တာရှညျ မခံ။ ထပျမံ ကြိုးပေါကျသညျ။ တိုကျပှဲတှေ ပွနျဖွဈသညျ။
၂၆ နှဈ သီရိလင်ျကာပွညျတှငျးစဈကာလအတှငျး အဓိကငွိမျးခမျြးရေးစာခြုပျမြားအပွငျ ငွိမျးခမျြးရေးဆှေးနှေးမှု အကွိမျ ၁၀၀၀၀ ပွုလုပျခဲ့သျောလညျး အောငျမွငျမှု မရခဲ့။ နောကျဆုံး ၂၀၀၆ ခုနှဈကတြော့ သီရိလင်ျကာအစိုးရက တမီလျကြားနယျမွတှေကေို အငျအားသုံး ထိုးဖောကျ သိမျးပိုကျခဲ့သညျ။ ၂၀၀၉ ခုနှဈကတြော့ တမီလျကြားနယျမွအေားလုံးကိုကို သိမျးပိုကျပွီးတျောလှနျရေး အမွဈပွတျသှားသညျ။ နောကျဆုံးတှငျ စဈရေးနညျးကို အသုံးခြ ဇာတျသိမျးလိုကျခွငျးဖွဈသညျ။ စဈကွီးပွီးဆုံးသှားသျောလညျး သီရိလင်ျကာ စဈတပျ၏ လူ့အခှငျ့အရေးခြိုးဖောကျမှုတှကေိုတော့ ယခုခြိနျထိပွောနေ ရေးနကွေတုနျးပငျ။
မွနျမာပွညျအခွအေနကေ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျ အငျအားစုတှေ စုံလငျသညျ။ လကျနကျအငျအား၊ လူအငျအားလညျး မြားပွားသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ငွိမျးခမျြးရေးစားပှဲဝိုငျးမှ တဈဆငျ့သာ ပွဿနာတှကေို ဖွရှေငျးနိုငျမညျ။ စဈရေးနညျးက အားလုံးအတှကျ အထိအခိုကျ အဆုံးအရှုံးကွီးမားနိုငျသညျ။ တိုငျးပွညျအတှကျ အန်တရာယျကွီးမားသညျ။ ယခုပဲကွညျ့။ မွောကျပိုငျး လကျနကျကိုငျ သုံးဖှဲ့၏ တိုကျခိုကျမှုက နောကျဆကျတှဲ တိုကျပှဲတှေ။ လမျးပနျးဆကျသှယျရေးအခွခေံအဆောကျအဦးတှေ ပကျြစီး။ အပွဈမဲ့ပွညျသူမြား အသကျဆုံးရှုံး။ နရေပျအိုးအိမျမြားကို စှနျခှါထှကျပွေး ဆိုသညျ့ ဒုက်ခသံသရာထဲ ရောကျလာတော့မညျ။ ကမ်ဘာတှငျ အရှညျကွာဆုံး မွနျမာ့ ပွညျတှငျးစဈက အခွားနိုငျငံမြားနှငျ့မတူသလို တပျမတေျောကလညျး အခွားတပျမတျောမြားနှငျ့မတူ။ ဤ ထူးခွားမှုကသညျပငျ မွနျမာ့ပွညျတှငျးစဈ သကျဆိုးရှညျနရေသလော။ မပွောတတျတော့ပါ။
I asked to talk performance ..
After fading color fading backpack series. Some of the military equipment at the waist, Models, Lined carrying the gun.. The broad back of soldiers in front of bamboo weaving. What I do not know. To the front lines, the appearance of Burma is relatively dry fading flowers. Face, flying off the court copper colors. Meet and see the big jaws. Weathering weather affected the battlefield defiance. မွနျမာစဈသညျ extinctalong time, the structure ofafading fading spent.
US troops and their whole body is full of modern equipment. Hold full of modern weapons. Hat, the boots, the whole body isasoldier wearingavariety of necessary equipment. Even people do not see. Remember the big picture. The strong rigid body. Full training activity. Out back. Myanmar soldiers and comparison. Knowledge of military capabilities. Outside isavery different form. Rakhine see the same battlefield, Look at the ground by Kachin frontline battlefield in the form of anything မွနျမာစဈသညျ seen in this style.
Until the city’s main Military Academy located in Pyin Oo Lwin armed terrorist groups fired log fire in the future. Engineering University launcher. The town’s station. The terrorist group raided five places at the same. Mandalay-Muse trading in August on the path, bridge or blast attack. The police raided the camp. Liverpool burn shoot the gate guards. (15) days of August, Sign အလဈအငိုကျ dawn attack soldiers (9), (3), police (3) civilians were killed. Attack group visit TNLA, AA, MNDAA armed groups have estimated that between 300 and 200.
A group of so many armed force entered as Pyin Oo Lwin area being attacked by the military challenge to pluck ears saliva. All who heard the panic occurred. The region would be able to arrive at the current military situation. How broken နပွေီလဲ security. Some understand this military intelligence system (Intelligence Failure) he observed the fall. Penetrate inside the enemy attacks are not doing now. Long time ago.
In 2017, Rakhine State August 30 police outpost attack processes simultaneously. Last January (4) Militia in Maungdaw, Buthidaung and four simultaneous attacks, the raid police station Killing police in the process (13) (9), brought arms into injured Asacaptive was abducted on. State police stations in the recent strike at dawn attack, and health care is far, the military once prevention Intelligence is not available.
2017, In the process of the terrorist attacks of Bengalis was ridingaBorder Guard police battalions. The police lost their lives. At the hearing, power factor, Border Guard police weapons incomplete. Mounted implements weapons was important, he said. Maungdaw, Buthidaung and police camps were also attacked police stations simultaneously. Lives were lost. These conditions tend to respond by injecting military attack helicopter.
Myanmar, in this case and there were many questions about performance. The armed groups, the military do not. The army is an expansion of the surface force fighter jets, helicopters, The tank, The submarine’s coffers fill the massive purchase using the source of grassroots forces despite being undermined. Collect the military withapowerful serve voluntarily in the picture. Thousands gather recruits having difficulty gaining the prospective officers for developing universities annually.
Ethnic armed groups and the military has come up foradecade and has beenaseries of clashes. Thus far, this is incomplete. The losses of war had passed. Will defeat the other side. You have an answer. Now peace is trailing. War is trailing.
Sri Lanka since 1983 has revolutionized the state government and separatist Tamil Tiger. Powerful as the Tamil Tigers, the Sri Lankan government can challenge the well. Sri Lanka’s northern and eastern areas controlled by the Tamil Tigers in the government’s position. The Tamil Tigers areavariety overturned it. Terrorists Made by multiple bombings. Sri Lankan army and the Tamil Tigers from the 2009 war ended. The 26-year civil war in Sri Lanka between 100,000 to 80,000 innocent people lost their lives, according toaUN report. Like most of the country’s internal processes Sri ကာင်ျ between the government and Tamil Tiger peace to the United Nations, including in Norway International organizations brokered deal after exactly four major peace treaty was signed. A ceasefire was. However, peace isalong time. Further broken. Fighting back. During the 26-year civil war in Sri Lanka peace treaties, as well as 10,000 times, but successful peace negotiations. Finally,agovernment Tamil Tigers in Sri Lanka in 2006, was occupied penetrate Territory force. In 2009 occupied territories and the Tamil Tigers Revolution eradicated. Finally, using the military ending. After the war go away, the Sri Lankan military’s human rights abuses are still talking about still.
Perfect in Burma ethnic groups. Armed forces, The manpower increase. Therefore, to solve the problems through peace talks. The military is the only momentahuge loss. Dangerous for the country. Now look. The three armed ethnic armed attack in northern subsequent fights. Transportation infrastructure damage. Innocent people lost their lives. Location outskirts homes Lo will run the cycle of trouble arrived. The world’s longest civil war in Myanmar and other countries and different တပျမေ differs from other Army. This uniqueness of its civil war in Burma. Longer speak.